दिनमा कति कप कफी पिउनु उपयुक्त हुन्छ ? - Nagarik Today
होम » दिनमा कति कप कफी पिउनु उपयुक्त हुन्छ ?
दिनमा कति कप कफी पिउनु उपयुक्त हुन्छ ?
by नागरिक टुडे साउन १२, २०७८
कफी पिउनुका आफ्नै फाइदा/बेफाइदा छन् । तर, हालै भएको एक अनुसन्धानले भने कफी पारखीलाई एकपटक सोच्न बाध्य बनाएको छ अस्ट्रेलियाका वैज्ञानिकका अनुसार दैनिक ६ कपभन्दा बढी कफी पिउनाले यसको सिधै असर मष्तिष्कमा पर्ने देखिएको छ । फलस्वरुप यसले डिमेन्सिया(बिर्सिने रोग) हुने खतरा ५८ प्रतिशत हुनेसँगै स्ट्रोकको पनि खतरा देखिएको छ ।
कफी कसरी हानीकारक ?
कफीमा पाइने क्याफिन नामक तत्वले सिधै हाम्रो दिमागको नर्भस सिस्टममा असर पार्छ । यसैको असरका कारण कफी पिएपछि ‘रिल्याक्स्ड’ महसुश हुन्छ । तर, यदि यसको मात्रा चाहिने भन्दा बढी भएमा क्याफिनले दिमागमा नकारात्मक असर छोड्न थाल्छ । उदाहरणका लागि निन्द्रा नलाग्नु ।
कफी पिइरहेको समयमा त्यहाँ भएको क्याफिन रगत हुँदै पूरै शरीरमा फैलिन्छ । जसकारण यसको असर सजिलै दिमागमा पर्छ । तर, असर परे पनि हामीलाई थकान महशुस हुँदैन । किनभने क्याफिनले दिमागको ‘एडिनोसिन’ नाम गरेको न्यूरोट्रान्स्मिटरलाई ब्लक गर्दिन्छ ।एडिनोसिनले नै हामीलाई थकान महसुश गराउँछ । तर, क्याफिनले त्यसलाई ब्लक गरिदिएपछि हामी ‘फ्रेस’ भएको महशुस गर्छौं ।
डायटिसियन सुरभी पारिकका अनुसार क्याफिनले हामीलाई केही हदसम्म फाइदा पुर्‍याउँछ । तर, यसको सेवन अधिक मात्रामा भयो भने नोक्सान हुने हो । एक दिनमा ३ सय देखि ४ सय मिलिग्राम भन्दा बढी क्याफिनको सेवन गर्नु हुँदैन । दिनमा एकदेखि दुई सानो कपमा कफी सेवन गर्न सकिन्छ ।
भोक नलाग्ने र शरीरमा पानीको कमी
क्लिनिकल डायटिसियन पारिकका अनुसार क्याफिनको सेवनपछि मानिसले आफूलाई शारीरिक र मानसिक रुपमा एकदम ऊर्जावान भएको महसुश गर्छ । कफी पिएपछि उसले धेरै काम गरे पनि थकान महशुस गर्दैन । तर, जब क्याफिनको मात्रा धेरै हुन जान्छ, त्यसपछि भोक पनि कम लाग्छ जसकारण शारीरिक तौल घट्न थाल्छ ।
क्याफिनको मात्रा धेरै भएपछि नै राम्रो निन्द्रा पर्दैन, धेरै भन्दा धेरै पिसाब लाग्छ र शरीरमा पानीको पनि कमी हुन्छ । क्याफिनको अधिक सेवन गरेपछि शरीरमा ऊर्जा बढ्नुको असर रक्तचापमा पनि पर्छ । यसले व्यक्तिहरुमा उच्च रक्तचापको समस्या निम्त्याउन सक्छ । जसले मुटुमा पनि असर छोड्न सक्छ । त्यसकारण क्याफिनको मात्रा अधिक सेवन गर्नबाट बच्नुपर्छ ।
दृष्टिविहीन हिमानीले जितिन् केबीसीमा करोड
‘आइफोन–१२’मा भएको समस्या एप्पलले नि:शुल्क बनाइदिने
टिभिएस एनटर्क १२५ पोखरामा
सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल भदौमा खुलाउने तयारी
अगस्ट १ देखि पर्यटक भिसा वाहकले साउदी प्रवेश गर्न पाउने
सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, तोलामा एकैदिन ११ सय रुपैयाँले बढ्याे
थपिए ३३ वटा नयाँ विश्व सम्पदा क्षेत्र